विचार / विश्लेषण तराईका सांसद ऋषिकेष भन्छन्ः देउवा र प्रचण्ड नेपाललाई भारतमा गाभ्ने नयाँ लेण्डुप दोर्जे हुन्
Thursday, 1 Dec, 2016 3:50 PM
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि तिब्र विरोध जनाएको छ । पूर्वी तराईको भारतीय सीमाना जोडिएको मोरङबाट निर्वाचित एमालेका सांसद ऋषिकेष पोखरेलका विचारमा तराई र पहाड अलग गर्ने माग मधेसी जनताको नभएर मधेसी जनताले अस्वीकार गरेका भारतीय एजेन्टहरुको रहेको दाबी गर्छन् । एमाले सांसद पोखरेलसँग चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले गरेको कुराकानीः संविधान संशोधन विरुद्ध संसदमै मात्रै आन्दोलन गरे हुँदैन ? किन सडकमा जानु पर्यो ?
हामी संसद र सडक दुवै ठाउँमा आफ्ना मान्यता प्रभावकारी रुपमा राख्न चाहन्छौं । कसको एजेण्डा लिएर माओवादी र कांग्रेस संविधान संशोधन गर्न खोज्दैछन् ? यो कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । सडकमा जाने भनेको संशोधन प्रस्तावमा लुकेका देशका लागि हानीकारक कुरा के हुन् जनतालाई बुझाउनका लागि हो । दोस्रो कुरा उनीहरुले जुन उद्धेश्यका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजेका हुन् हामी त्यसलाई असफल पार्न चाहन्छौं । हामीले आज संसद अवरोध गर्यौं, यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं । आम नेपालीलाई आव्हान गर्दछौं, सबैलाइ नेपाली हौ भने जाग भन्छौं । आज पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले नेपाली जनता र राष्ट्रिय एकताको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् हामी राष्ट्रियता बचाउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौं । जसरी सिक्किम भारतमा बिलय भयो नेपाललाई त्यही गर्न शेरबहादुर र पुष्पकमल लागेका छन् । अहिले यी दुई पात्र नेपाललाई भारतमा गाभ्न खोज्ने नयाँ लेण्डुप दोर्जे हुन् ।
भनेपछि मुलुक अव द्वन्द्वमा गयो ?
यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि तिनी ठेकेदारलाई सोध्नुस् । मिलेर बसेका जनतालाई विभाजन गर्न तिनीहरुले कसको इसारामा यस्तो काम गरिरहेका छन् ? । प्रदेश नम्बर पाँचका जनताको चाहना विपरित कसको चाहनामा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ? त्यहाँ नेपाली काँग्रेस, एमाले माओवादी मोर्चा कसैले पनि त्यो प्रदेश विभाजन भएको हेर्न चाहेको छैन । त्यहाँ अहिले जुनसुकै विचार राख्ने जनता पनि सरकारको प्रस्ताव बिरुद्ध आन्दोलनमा छन् । जनता मिलेर बसेका ठाउँमा कसका लागि प्रदेश विभाजन गर्न खोजिंदैछ ? उनीहरुको उद्धेश्य नेपालमा तराई पहाड अलग गरेर पराधीन बनाउने नै हो । तर, हामी त्यसो हुन दिन्नौं । तर, संविधान संशोधन मोर्चाको माग हैन र ?
हो, मोर्चाले प्रदेश नम्बर ५ विभाजन गर्न मागेको थियो ? संशोधन गर्दा के कुरा देशको हितमा छ के कुरा हितमा छैन हेर्नु पर्दैन ? जसले जे माग गर्यो, विचारै नगरी प्रस्ताव ल्याउनु हुन्छ ? फेरि तपाई यो बुझ्नुस कि अहिले प्रदेश नम्बर पाँच मात्रै चलाएका छन् भोलि यही नजिर देखाएर प्रदेश नम्बर १ र ७ मा भाँडभैलो मच्चाउने तयारी छ । किस्ताबन्दीमा नेपाललाई सिध्याउने र पराधीन बनाउने योजना छ उनीहरुको । तपाईंले पटक पटक भन्नु भो, जनताको चाहना होइन भनेर, कसका लागि हो त संशोधन ? यिनीहरु आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि अर्कैको आदेश पालना गर्ने आदेश पालक हुन् । यिनीहरु त दलाल रहेछन् । नेपाललाई बिक्रि गर्ने अड्डाका रुपमा संसदलाई प्रयोग गर्न चाहँदा रहेछन् । यिनीहरुको अहिलेको ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव र संविधान जारी गर्दा भारतले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे प्रस्तावमा केही फरक छैन । तपाईं आफैं भन्नुस् कसको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुँदैछ ।
मधेसी मोर्चाको माग के हो थाहा छ ? सर्लाहीतिर चुनाव हारेको राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलाई झापा, मोरङ र सुनसरी चाहियो रे । म मोरङका जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि र मलाई मोरङमा निर्वाचित गर्ने मधेसी जनताले तिनीहरुले जे भन्यो त्यो मान्नु पर्ने ? पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुरले नै यतिसम्म गरे भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ ? यिनीहरुले संविधान संशोधनका लागि तयार गरेको सिद्धान्त नै बहुराष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्त छ । के तराई अलग राष्ट्र भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गर्न सक्छ ? अनि यस्तो सिद्धान्तका आधारमा संविधान संशोधन गर्न यिनीहरुले विदेशीहरुसँग कति पटक चोचोमोचो मिलाए ? यसले पुष्टि गर्छ– जसरी सिक्किम भारतमा बिलय भयो नेपाललाई त्यही गर्न यी दुई पात्र लागेका छन् । अहिले शेरबहादुर र पुष्पकमल नयाँ लेण्डुप दोर्जे हुन् । यिनीहरुका ब्यवहारले यो पुष्टि हुन्छ, आरोप होइन । मोर्चाको माग झापा, मोरङ, सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा मिलाउनु पर्ने भन्ने छ होइन र ? म आफैं मोरङबाट निर्वाचित सदस्य हुँ । भारतको सीमासम्म जोडिएको यो क्षेत्रमा कुनै पनि मधेसी दाजुभाइले झापा, मोरङ, सुनसरी बेग्लै चाहियो भनेका छैनन् । त्यहाँ कुनै जातिगत समस्या पनि छैन र भौगोलिक समस्या पनि छैन । अहिले जति पनि गतिविधि भइरहेको छ यो सबै भारतको उक्साहटमा भइरहेको छ मधेसका जनताको माग त देखाउने कुरा मात्रै हो । सर्लाहीतिर चुनाव हारेका राजेन्द्र महतो महन्थ ठाकुरहरुले मोरङ सुनसरी झापा हामीलाई चाहियो भन्न पाउँछन् ? को हुन् ती ? यहाँका जनताको नाममा माग राख्ने ? अव कसरी समाधान होला ?
जनता ठग्ने बिदेशी दलालहरुलाई ठेगान लगाएर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर तत्काल तीनवटै तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु नै समस्याको समाधान हो । यिनीहरुको अहिलेको ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव र संविधान जारी गर्दा भारतले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे प्रस्तावमा केही फरक छैन । यो संशोधन प्रस्ताव मधेसीलाई देखाएर भारतले ल्याएको हो ।